Midnimaddii Lixdankii Iyo Maanta: Fariinta Shacabka Iyo Macnaha Soo Dhaweynta – Qalinka: Jamaal Cali Xuseen | Foore News
Home Aragtida Dadweynaha Midnimaddii Lixdankii Iyo Maanta: Fariinta Shacabka Iyo Macnaha Soo Dhaweynta – Qalinka:...
Midnimaddii Lixdankii Iyo Maanta: Fariinta Shacabka Iyo Macnaha Soo Dhaweynta – Qalinka: Jamaal Cali Xuseen
Mar waa fariin ay u dirayaan beesha caalamka in markasta oo ay wadahadaladu burburaan ama aanay wax nuxur weyni ka soo bixin ay ku farxaan. In masiirkooda mustaqbal ay shacabku gacanta ku haystaan oo walaa beesha caalamka walaa cid kale aanay marnaba mustaqbalkooda go’aan ka gaadhi karin dawlado shisheeye.
Mar waa fariin ay u dirayaan madaxdooda oo marna ay dhiirigelinayaan, marna ay hanjabaadi ku jirto. Iyagoo leh hadaad qadiyadii ka soo hadashay sidan baan kuu soo dhaweynaynaa, hadaad wax kale noola iman lahaydna sidan baanu kuugu mudaharaadi lahayn oo weliba kuugu soo dhici lahayn gurigaaga.
Marna waa fariin ay u dirayaan dawladda Soomaaliya oo ay leeyahiin, walaal qadiyadani maaha mid uu nin madax ahi kuu saxeexi karo. Kuwii Lixdankiina anagaa dabadda ka soo galnay oo midnamadda keenay, kuwan maantuna kuma dhacaan midnimo. Hadaad wixii aan lixdankii kuu keenay aad dafirsan tihiin weli anagoo 30 sanadood idinka maqneyn weli, maanta oo aanay shanti Soomaaliyeed jirin oo ay weliba Soomaaliya sii kala sarifantay, halkayagaasi baan joogaynaa xataa hadaan nala aqoonsan. Mida kale lacag yaroo caawimo ah oo cid kale ina wada siisay haday adiga kula weyn tahay iska haysta.
Maanta 2020 shantii Soomaaliyeed laysku keeni maayo, Reer Waqooyigu 30 sanadood Oo waaya aragnimo ah bay leeyahiin oo ay iskood isku maamulayeen, qiiraddiina meesha Ma taalo. Hayska itaal daraadan Oo sidii la rabay yaan wax loo soo waddani 30 sanadood bay is xukumayeen.
Waxay arkaan walaalahood Reer Koonfureedka oo weli ka dafirsan wixii ay ku darsadeen weliba iyaga oo maanta weli isu haysta dawlad iyagii ka maqnaa 30 sanadood raba inay wax u yeedhiyaan. Maanta halkay Reer Waqooyigu joogeen 1960 kii koonfur ayaa joogta. Koonfur lixdankii 10 sanadood ayaa dawladnimadda loo tababarayoo runtii way la yaabanaayeen qoladan Reer Waqooyiga ee waalan ee xornimaddii la siiyey iska tuuraysa oo waa kuwii u bixiyey ” Qaldaamiin”, waana sababta aanay waxbaba iskaga tirin.
Dadka qaar waxay ku doodayaan in maanta halkii Koonfur baa taagan oo Somaliland oo dawladnimo dhadhamisay oo aan muraad iyo xiiso u qabin koonfur oo weliba aan nabad ahayn isna sii kala sariftay, welina u hadlaysa sidii lixdankii; ma sabab baa jirta ay waxooda iskaga kala daadiyaan?.
Siday Somaliland u doonaysay midnimo 1960 kii, Maanta Soomaliya uma rabto. Shantii Soomaaliyeedna lamaba hadal hayoo oo Ey baa cunay. Kolkaa sidee bay wax u hagaagayaan. Kolka heshiis (negotiation) la gelaya dhinac baa aad u tanaasula. Tan warba isuma hayso halka ay labadda shacbi kala jooggaan. Cida wadahadlaysaana kolka hore talo weyn kamay soo qaadan shacabkoodii iyo intii ehelu caqliga u ahayd waxay goobta la imanayaan.
Siyaasi Ahna Aqoonyahan
Previous articleTurkiga Oo Saluug Weyn Ka Muujiyay Shirkii Somaliland Iyo Soomaaliya, Kana Hadlay Halka Ay Ku Dambeeyeen Heshiisyadii Ay Hore Labada Dhinac U Wada Gaadheen
Next articleMooshinkii Kursiga Lagaga Tuurayay Guddoomiyaha Aqalka Sare Ee Soomaaliya Oo Meel Adag Maraya, Caqabado Ku Gudban Iyo Isku Dayga Farmaajo